Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. दुईदिनसम्म चलेको विज्ञान सडक मेला सम्पन्न – Emountain TV
दुईदिनसम्म चलेको विज्ञान सडक मेला सम्पन्न
काठमाडौं, २९ जेठ । समाजका लागि विज्ञान तथा नव प्रवर्द्धनका लागि समृद्घि भन्ने नारासहित ललितपुरमा आयोजना गरिएको विज्ञान सडक मेला बुधवार समापन भएको छ । दुईदिनसम्म चलेको सम्मेलनमा करीव पाँचसय भन्दा बढिको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भए गरेका उपलब्धीका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा युवा पुस्तालाई विज्ञान तथा प्रविधिको ज्ञान दिनका लागि विज्ञान सडक मेला आयोजना गरिएको हो ।
ललितपुरको जावलाखेलमा भएको मेलामा नास्टका वैज्ञानिक सहित विभिन्न स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । मेलामा आम मानिसको जनजीवनमा परिवर्तन आउने खोज तथा अनुसन्धानको बारेमा छलफल भएको थियो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अनुसार सर्वसाधारणलाई समेत विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासका नयाँ नयाँ अवधारणवारे जानकारी दिनु मेलाको मुख्य उद्देश्य हो ।
विज्ञान सडक मेलाले आगामी दिनमा आम नागरिकमा वैज्ञानिक सँस्कारको विकासका लागि सचेतना बढाउन सघाउने विश्वास गरिएको छ । विज्ञान सडक मेला नेपालमा पहिलो पटक भएको हो । आगाअी वर्षहरुमा राजधानीमा मात्र केन्द्रित नभइ देशका विभिन्न ठाउँमा यस्तो मेला आयोजना गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
मेलामा विज्ञान प्रविधि र आविष्कार सम्बन्धित पोष्टर, पम्प्लेट डेमो र नमुना प्रविधिका सामाग्रीहरु राखिएका थिए । विज्ञान र प्रविधिसंग सम्बन्धित गतिविधि समेटिएका वृत्तचित्र प्रदर्शन र विभिन्न खाद्य्य प्रविधि र परिकारका स्टल पनि राखिएका थिए ।
दुईदिनसम्म चलेको सम्मेलनमा विज्ञान र प्रविधिको क्ष्ेत्रमा काम गर्ने सरकारी, गैरसरकारी तथा निजि संघसस्था र शैक्षिक संघसंस्थाका करीव ५० वटा स्टल राखिएका थिए । मेलामा सर्वसाधारणलाई निशुल्क प्रवेश तथा अवलोकनको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । पछिल्लो समय विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा युवा पुस्ताको रुचि घटिरहेको बेला यो सम्मेलनले केहि हदसम्म भएपनि हौसला बढाएको विश्वास लिइएको छ ।